ကျွန်ုပ်တို့ကို အားနည်းစေသော နတ်ဆိုးကို အောင်နိုင်ခြင်း - “ဤနတ်မျိုး”! | Overcoming the Demons that Weaken Us - This Kind! | Real Conversion
နတ်ဆိုးကို အောင်နိုင်ခြင်း - “ဤနတ်မျိုး”!
ဩဂုတ်လ ( ၅ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင်
“အိမ်သို့ဝင်တော်မူပြီးမှ တပည့်တော်တို့က၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ထို နတ်ကို အဘယ့်ကြောင့် မနှင်ထုတ်နိုင်ပါသနည်းဟု တိတ်ဆိတ် စွာမေးလျှောက်ကြသော်၊ ကိုယ်တော်က၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ အစာ ရှောင်ခြင်းမှတပါး အဘယ်သို့သောအားဖြင့် ထိုနတ်မျိုးသည် မ ထွက်နိုင်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” ( မာကု ၉း ၂၈-၂၉ )
ယနေ့ညတွင်နတ်ဆိုးနှင့်စာတန်တို့အကြောင်းကို ကျွန်တော်ဟောပြောသွားပါမည်။ထို အကြောင်းကို Dr. J. I. Packer က “မျက်မှောက်ခေတ်အသင်းတော်များ၏ ပြိုလဲခြင်း” ဟု သတ်မှတ်လိုက်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ၁၈၅၉ ခုနှစ်ကတည်းက နိုင်ငံတွင်း အဓိက နိုးထမှုကြီး လုံးဝမဖြစ်တော့ပါ။ ကျွန်တော်က ဒေါက်တာ Martyn Lloyd-Jones ၏ တရားဒေ သနာအကျဉ်းအပေါ် အမှီပြုထားသည်။ အဓိကအကြောင်းအရာနှင့်အကျဉ်းချုပ်မှာ ဒေါက်တာ Martyn Lloyd-Jones ထံမှဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်က ကျမ်းပိုဒ်နှစ်ခုကို စဉ်းစားဆင်ခြင်လိုပါသည်။ ထိုကျမ်းပိုဒ်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော်ကို အချို့သောအချက်များတွင် တိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းထားခြင်း အပါ အဝင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အနောက်တိုင်းကမ္ဘာရှိ “ပြိုကွဲသော” အသင်းတော်များ၏ လိုအပ်ချက်များတွင် အသုံးချရန်ဖြစ်ပါသည်။
“နိုးထမှု” ဟူသောစကားလုံးသည် ယနေ့လူတွေကို ပိတ်ဆို့ထားသည်ကို ကျွန်တော် သိပါသည်။ သူတို့က ထိုအကြောင်းအရာကို လုံးဝမကြားလိုကြပါ။ သို့ရာတွင် သူတို့ခံစားရ သည့်အရာမှာ စာတန်နှင့်သက်ဆိုင်လှပါသည်။ ဤအရာသည် စာတန်က လူတို့ကို မစဉ်းစား စေလိုသောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်နှင့်အသင်းတော်အား လုံးတွင်လိုအပ်လျက်ရှိသော စဉ်းစားဝေဖန်သုံးသပ်တတ်သော လိုအပ်မှုအကြောင်း ပြောဆို သောကြောင့် အလေးထားနားထောင်ရန် ဆုတောင်းပါသည်။
ကျွန်တော်တို့အယောက်တိုင်း အလေးထားသင့်သော အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါ သည်။ ယနေ့ အသင်းတော်များ၏အခြေအနေကို ကောင်းကောင်းကြီး စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ် ခြင်းမရှိလျှင် ကျွန်တော်တို့သည် အလွန်ဆင်းရဲချို့တဲ့သောခရစ်ယာန်များဖြစ်လာကြပေမည်။ တကယ်တော့ သင်သည် နိုးထမှုကို လုံးဝစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိလျှင် သင်သည် ခရစ်ယာန်တစ် ယောက် အမှန်တကယ်ပဲဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာ ဆင်ခြင်ရပေမည်။ သင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အ သင်းတော်ကိုအလေးမထားလျှင် အခြားသူများအတွက်ဆို သင်သည် လုံးဝခရစ်ယာန်တစ် ယောက်ဖြစ်မည်မဟုတ္ပါ။ ကျွန်တော် နောက်တစ်ကြိမ်ပြောလိုပါသည်။ စစ်မှန်သော နိုးထမှု သည် လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားသည့် အရာတစ်ခုဖြစ်သင့်ပါသည်။
မာကု အခန်းကြီးကိုးတွင် ဤအဖြစ်အပျက်အကြောင်းကို စဉ်းစားရင်း စတင်ကြပါစို့။ အလွန်အရေးပါသည့် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်သည် ခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးခုအထဲက သုံးခုဖြစ်သည့် မဿဲ၊ မာကုနှင့်လုကာ တို့တွင် အလေးထားဖော်ပြထားပါသည်။ မာကု၏ရေတွက်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီး အပိုဒ်နှစ်ခုကို ဖတ်ရှုလိုပါသည်။ မာကုအခန်းကြီး၏ အစောပိုင်းအပိုင်းများက ခရစ်တော်သည် ပေတရု၊ ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကို ခေါ်ပြီး အံ့ဩဘွယ်အရာအဖြစ်အပျက်ကို သူ့တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရာနေ ရာ ယေရှု၏ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲသည့်တောင်ပေါ်သို့ တက်သွားခဲ့ကြပါသည်။ သို့ရာတွင် သူတို့သည် တောင်ပေါ်ကဆင်းလာသောအခါ သူတို့သည် ကျန်ရစ်ခဲ့သော တပည့်တော်များ ကို ဝိုင်းရံလျက် ငြင်းခုံနေကြသော လူအုပ်ကြီးကို တွေ့ခဲ့ကြသည်။ ယေရှုနှင့်အတူ ပြန်လာကြ သောတပည့်တော် သုံးဦးက ဖြစ်ပျက်သမျှအရာအားလုံးကို နားမလည်နိုင်ကြပါ။ ထို့နောက် လူတစ်ဦးသည် လူအုပ်ထဲက ထွက်လာ၍ သူ့သားသည် ပါးစပ်တွင် အမြှုပ်များထွက်လာ သည်တိုင်အောင် နတ်ဆိုးစွဲခြင်းခံနေရကြောင်း ယေရှုကို လျှောက်ထားသည်။ ထိုသူက “( နတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်ဖို့ ) တပည့်တော်များထံသို့ခေါ်လာခဲ့သော်လည်း သူတို့သည် မတတ်နိုင် ကြ” ( မာကု ၉း ၁၈ ) ဟု ဆိုသည်။ သူတို့သည် ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ကြသော်လည်း မတတ်နိုင် ကြပါ။
ယေရှုသည် ထိုလူကို မေးခွန်းအနည်းငယ်မေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူသည် နတ်ဆိုး ကို အလျှင်အမြန် နှင်ထုတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် ခရစ်တော်သည် အိမ်ထဲသို့ဝင်ကာ တပည့် တော်များသည်လည်း သူနှင့်အတူ ပါလာခဲ့သည်။ သူတို့သည် အိမ်ထဲသို့ရောက်ကြသောအခါ တပည့်တော်များက “နတ်ဆိုးကို အဘယ့်ကြောင့် နင်မထုတ်နိုင်ကြရသနည်း။” ( မာကု ၉း ၂၈ ) ဟု မေးကြသည်။ သူတို့သည် အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ သူတို့ သည် အရင်ကဆို အမြဲတမ်း နှင်ထုတ်နိုင်လေ့ရှိကြသည်။ သို့သော် ဤတစ်ကြိမ်မှာတော့ လုံး၀ မအောင်မြင်ကြပေ။ သူတို့က“နတ်ဆိုးကို အဘယ့်ကြောင့် နှင်မထုတ်နိုင်သနည်း” ဟု မေးကြပါတော့သည်။ ခရစ်တော်က “အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းမှတပါး ဤနတ်မျိုးသည် လုံး ဝမထွက်နိုင်ပါ” ဟုသာ အဖြေပေးခဲ့သည်။ ( မာကု ၉း ၂၉ )
ယခုတွင် ယနေ့အချိန်၌ ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသော ပြဿနာ ကို ပြသရန် ဤအဖြစ်အပျက်များကို အသုံးပြုပါလိမ့်မည်။ ဤလူငယ်လေးက ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ ရှိ လူငယ်များကို ကိုယ်စားပြုထားပါသည်။ တပည့်တော်များက ယနေ့အသင်းတော်ကို ကိုစား ပြုပါသည်။ ယနေ့ ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်များသည် လူငယ်များကို အကူအညီပေးဖို့ ပျက် ကွက်နေသည်မှာ ထင်ရှားနေသည်မဟုတ်ပါလား။ George Barna က ကျွန်တော်တို့သည် အသင်းတော်တွင် ကြီးပြင်းလာသော လူငယ် ၈၈ % ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြသည် ဟုဆိုပါသည်။ ကျွန် တော်တို့သည် အနည်းစု၊ အနည်းငယ်ကိုသာ ကမ္ဘာကြီးထဲက ပြန်လည်ဆွဲနှုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်သည် သေခါနီးလျက် လျှင်မြန်စွာ ကျဆုံးနေပါသည်။ တောင်ပိုင်း နှစ်ခြင်းအသင်းတော်သည် ယခုတွင် တစ်နှစ်လျှင် အသင်းတော် ၁၀၀ဝပါးလောက် ဆုံးရှုံးကြ ပါသည်။ထိုအရာသည် ၎င်းတို့၏ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်သာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထရပ်တည်သောအသင်းတော်များသည် ပိုကောင်းအောင်လည်း မလုပ်နိုင်ကြပါ။ ထိုပုံ ပန်းသဏ္ဍာန်ကို ကြည့်သောသူတစ်ဦးဦးက ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်၏ထက်ဝတ်ခန့်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်တစ်ရာကထက် သာ၍ခွန်အားကြီးသည်မဟုတ်ကြောင်းကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ဒေါက်တာ J. I. Packer က “မျက်မှောက်ခေတ်အသင်းတော်အခြေအ နေကျဆုံးခြင်း”အကြောင်း ပြောဆိုသည်။
တပည့်တော်များကဲ့သို့ပင် ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်များသည် သူတို့ုလုပ်ဆောင်နိုင် သည်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ကြသည်။ သို့ရာတွင် သူတို့သည် ကျဆုံးကြသည်။ သူတို့သည် လူ ငယ်များကို အကူအညီပေးသည့်အချိန်တွင် တပည့်တော်များ ကျဆုံးသကဲ့သို့ ဆိုးဆိုးရွားရွားပဲ သူတို့သည်လည်းကျဆုံးခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့မေးရမည့်မေးခွန်းများမှာ “ကျွန်တော်တို့ သည် နတ်ဆိုးကို အဘယ့်ကြောင့် နှင်မထုတ်နိုင်ပါသလား” ဟု မေးမြန်းသင့်ပါသည်။ ဤကျ ဆုံးခြင်း၏ အကြောင်းရင်းကား အဘယ်နည်း။
မာကို အခန်းကြီးကိုးတွင် ခရစ်တော်သည် မေးခွန်းတိုင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိဟန်တူသည်။ ခရစ်တော်ပေးထားသည့်အဖြေမှာ အရင်ကကဲ့သို့ပင် ယနေ့လည်း အရေးကြီးပါသည်။
အဓိကအကြောင်းအရာကို ရိုးစင်းသည့်အချက်သုံးချက်ဖြင့် ခွဲခြားလေ့လာထားပါသည်။
၁။	ပထမအချက်မှာ “ဤသို့သောနတ်” ဖြစ်သည်။
သူတို့သည် အဘယ့်ကြောင့် နတ်ကို နှင်မထုတ်နိုင်ကြသနည်း။ ခရစ်တော်က “ဤနတ်သည် ဆုတောင်းခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်းမှတပါး မနှင်ထုတ်နိုင်ပါ” ဟု မိန့်တော်မူသည်။ အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုနှင့်အခြားတစ်ခုကြားမှာ ခြားနားမှုများရှိသည်ဟု သူက ပြောပါသည်။ အ တိတ်တွင် ခရစ်တော်က တရားဟောရန်နှင့်နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်ရန် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ပြီး တော့ သူတို့သည် ထွက်သွားပြီး တရားဟောကြသည်။ နတ်ဆိုးများစွာကိုလည်း နှင်ထုတ်ကြ ပါသည်။ သူတို့ပြန်လာသောအခါ ဝမ်းမြောက်လျက် ပြန်လာကြသည်။ သူတို့က နတ်ဆိုးများ သည် သူတို့လက်အောက်တွင်သာရှိကြောင်း ပြောကြသည်။
သို့ဖြစ်၍ ဤလူသည် မိမိသားကို သူတို့ထံခေါ်လာသောအခါ သူတို့သည် အထက်က လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်အတိုင်း အကူအညီပေးနိုင်မည်ဟု ထင်ကြသည်။ သို့သော် ယခုတစ်ကြိမ် တွင် သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုသည် ကျဆုံးခဲ့သည်။ သူတို့သည် ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ကြသော် လည်း ကလေးအတွက် အကူအညီ မဖြစ်ပါ။ သူတို့က အဘယ့်ကြောင့် နှင်မထုတ်နိုင်သည်ကို အံ့ဩမိခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ခရစ်တော်က “ဤသို့သောနတ်မျိုး” ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ “ဤသို့သောနတ်မျိုး” ကြားတွင် ခြားနားမှုရှီသည်။ ဤသို့သောနတ်မျိုးကို အထက်က အတိုင်း ကိုင်တွယ်ခဲ့ကြသည်။
ပြဿနာသည် အမြဲတမ်း အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ အသင်းတော်၏လုပ်ဆောင်ချက် သည်လည်း လူငယ်များကို စာတန်နှင့်နတ်ဆိုးများ၏တန်ခိုးတော်လက်မှ ရွေးနှုတ်ကယ်တင် ရန်ဖြစ်ပါသည်။ “အမှောင်မှအလင်းသို့၊ စာတန်တန်ခိုးမှ ဘုရားတန်ခိုးတော်ထဲသို့ ပို့ဆောင်ရန် ဖြစ်သည်။” ( တမန် ၂၆း ၁၈ ) ခေတ်ကာလတိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းတွင် အမြဲတမ်း ထိုနည်းအ တိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ အသင်းတော်သည် စာတန်နှင့်နတ်ဆိုးများနှင့်အမြဲ တိုက်ခိုက်နေရလေ့ရှိ ပါသည်။ နတ်ဆိုးများကြားတွင် ခြားနားမှုလေးတော့ရှိပါသည်။ သူတို့အားလုံးသည် တူညီကြ သည်တော့မဟုတ်ပါ။ တမန်တော် ရှင်ပေါလုက “ငါတို့သည် အသွေးအသားရှိသော ရန်သူတို့ နှင့်ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြမည်မဟုတ်။ အထွဋ်အမြတ္တို့နှင့်၎င်း၊ အာဏာစက္တို့နှင့်၎င်း၊ လောကီမှောင်မိုက်၌ အစိုးတရပြုလုပ်သော မင်းတို့နှင့်၎င်း၊ မိုဃ်းကောင်းကင်၌နေသော နတ် မင်းတို့နှင့်၎င်း၊ ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြ၏” ( ဧဖက် ၆း ၁၂ ) ဟု ဆိုထားသည်။ နတ်ဆိုးအဆင့် အတန်းများစွာ ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုအထဲတွင် စာတန်သည် ၎င်းတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ် ပြီး “အာကာသကောင်းကင်၏တန်ခိုးကို အစိုးရသောမင်းတည်းဟူသော ငြင်းဆန်သောသူတို့ ၌ပြုပြင်သော ဝိညာဉ်” ( ဧဖက် ၂း ၂ ) ဟု ဆိုထားပါသည်။ စာတန်သည် တန်းခိုးတော်အားလုံး ဖြင့် အသက်ရှင်နေသည်။ သို့ရာတွင် နိမ့်ကျသော နတ်ဆိုးတန်ခိုးများသာဖြစ်ပါသည်။ တပည့် တော်များသည် အားနည်းသောနတ်ဆိုးများကို လွယ်လင့်တကူ နှင်ထုတ်နိုင်ကြသည်။ သို့ သော် ထိုလူငယ်လေးအထဲ၌ရှိသောနတ်ဆိုးသည် သာ၍တန်ခိုးရှိသော နတ်ဆိုးဖြစ်သည်။ “ဤသို့သောနတ်မျိုး” ဟူသည်မှာ ခြားနားမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် သာ၍ကြီးသော ပြဿနာကို ဖော်ဆောင်ပေးသည်။ ပထမဆုံး လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ “ဤနတ်မျိုး” ဟုဆို သောအရာသည် ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ ရင်ဆိုင်နေရသောနတ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။
“ဤသို့သောနတ်မျိုး” ဟူသောစကားလုံးကို ကြည့်ရှုသောအခါ ယနေ့ခေတ်သင်းအုပ် များစွာတို့သည် ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲများတွင် ရှိနေကြသည်ကို သတိပြုမိကြသည်ကို အံ့ဩမိသည်။ သင်းအုပ်ဆရာအများစုက သူတို့သည် စာတန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများနှင့်တိုက်ခိုက်နေသောတိုက်ပွဲ ထဲရှိနေကြသည်ကိုပင် သတိမပြုမိကြပေ။ သင်တန်းကျောင်း၊ ကျမ်းစာကျောင်းတို့တွင်လည်း ကြီးမားသည့် လူသားနည်းစနစ်များကို အလေးအနက်ထားကြသည်။ သို့သော် သူတို့သည် တရားဟောဆရာများအား ၎င်းတို့၏ပြဿနာသည် ဝိညာဉ်နယ်ပယ်တွင်ဖြစ်နေကြောင်းကို လုံးဝမရိပ်မိကြပေ။
ထို့ကြောင့် သူတို့သည် အတိတ်က အောင်မြင်သည့်နည်းစနစ်များကို အသုံးပြုလျက် ဆက်လက်ချီတက်ကြသည်။ သူတို့သည် ဟောင်းနွမ်းသောနည်းစနစ်များက “ဤသို့သော နတ်” များအတွက် အသုံးမတည့်သည်ကို သတိမပြုကြပေ။ လိုအပ်ချက်ရှိသည်ကို လူတိုင်းက သိကြသည်။ သို့သော် မေးခွန်းမှာ ထိုလိုအပ်ချက်အတိအကျက အဘယ်နည်း။ ယနေ့တွင် လို အပ်ချက်အတိအကျကို အလေးအနက်ထားမထားမချင်း၊ ထိုလူငယ်လေးအပေါ် တပည့်တော် များ၏မကောင်းမြင်မှုလိုအဖြစ်မျိုး ကြုံတွေ့နေကြရအုံးမည်အမှန်ပါ။
ယနေ့ခေတ် “ဤသို့သောနတ်မျိုး” မှာ အဘယ်နည်း။ “ဤသို့သောနတ်မျိုး” မှာ နတ် ဆိုး၏တည်ရှိရေးဝါဒပင်ဖြစ်ပါသည်။တည်ရှိရေးဝါဒက တွေ့ကြုံလျှင် တစ်ခုခုရှိသည်ဟု ဆိုကြ သည်။ သင်ခံစားမှသာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်၌ လူတို့၏စိတ်နှလုံးသည် “နတ်ဆိုးခံစား ချက်တစ်ခု” အားဖြင့် မိုက်မဲကြသည်။ တည်ရှိခြင်းဆိုင်ရာနတ်ဆိုးခံစားချက်က သင်သည် ဝမ်း သက်သာစေသောအတွေ့အကြုံအားဖြင့် သေချာစေရပါ။ နတ်ဆိုးများက သင်တို့သည် ဤသို့ သော ခံစားချက်မျိုးရှိလျှင် သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြောင်း သက်သေထူမည်ဟု ဆိုပါ သည်။
ဤမျက်ကန်းလူတို့သည် တရားစီရင်သောဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်နိုင်ကြပါ။ သူတို့ သည် ခံစားချက်တွင်သာရှိကြပါသည်။ သူတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ ခံစားချက္ လိုအပ် သည်ဟု ထင်ကြသည်။သူတို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြောင်းကို သက်သေထူနိုင်ရန်အတွက် “သေ ချာသည့်” ခံစားချက်တစ်ခု လိုအပ်သည်။ သူတို့၏ “စိတ်ချရမှု”သည် ရုပ်တုတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါ သည်။ သူတို့သည် ယေရှုခရစ်ကို မကိုးစားကြဘဲ ခံစားချက်ကိုသာ ကိုးစားကြပါသည်။ ကျွန် တော်တို့က “ခရစ်တော်ကို အမှန်တကယ် ကိုးစားပါသလား” ဟု မေးကြသည်။ သူတို့က “မကိုးစားကြပါ” ဟု ပြန်ဖြေကြသည်။ မကိုးစားကြပါဟု အဘယ့်ကြောင့် ဖြေဆိုကြသနည်း။ အကြောင်းမှာ သူတို့သည် မှန်ကန်သည့် ခံစားချက်မရှိကြသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ သည် ခရစ်တော်အပေါ်မဟုတ်ဘဲ သူတို့၏ခံစားချက်အပေါ်မှာသာ ယုံကြည်ကိုးစားကြသည်။ နတ်ဆိုးသည် သူတို့၏ဥာဏ်မျက်စိကို ကွယ်စေပါသည်။ “ဤသို့သောနတ်မျိုး” ကို ဆုတောင်း ခြင်း နှင္႔ အစာရှောင်ခြင်းအားဖြင့်သာ အနိုင်ယူနိုင်ပါသည်။ “ဤသို့သောနတ်မျိုး” ၏ ချုပ် နှောင်မှုကလွတ်မြောက်ရန် အစာရှောင် ဆုတောင်းရပါမည်။
၂။	ဒုတိယအချက်မှာ ကျဆုံးသောနည်းစနစ်ဖြစ်ပါသည်။
အတိတ်က အလွန်အထောက်အကူဖြစ်သည်ဟု ထင်ရသောအရာများကို အသင်း တော်က လုပ်ဆောင်နေသည်ကို မြင်ရသည်။ သို့ရာတွင် “ဤသို့သောအရာ” များအပေါ်တွင် ရေရှည်ထိရောက်မှုမရှိတော့ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်တို့သည် နည်းစနစ် ဟောင်းများကိုသာ မှီခိုအားထားပြုပြီး လူငယ်အားလုံးလိုလိုကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။ လောကကြီး ထဲကနေ လူများပြောင်းလဲလာဖို့ အလွန်ပင် ခက်ခဲနေပါသည်။ နားလည်မှုလွဲမှားသည့်အခြေ အနေတွင် ထိုအစီအစဉ်ထဲတွင် တနင်္ဂနွေနေ့ကျမ်းစာသင်တန်းကြောင်းကို ပြုလုပ်မည်။ လွန်ခဲ့ သော တစ်ရာနှစ်ဆယ့်ငါးခုနှစ်က အလွန်အသုံးဝင်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ယနေ့တွင်လည်း အနည်းငယ်တော့ အကျိုးရှိနေသေးသည်။ ကယ်တင်ခြင်းဝေစာနှင့်ပတ် သက်၍လည်း အနည်းငယ်ပြောလိုပါသည်။ တခါတလေတော့ လူတွေဖတ်ပြီး ဘုရားကျောင်း သို့ လာခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော် ဆရာတွေကို ရိုးရိုးလေးမေးလေ့ရှိတာက “ဝေစာကိုဖတ်ပြီး ပြောင်းလဲလာသောလူငယ် ဘုရားကျောင်းလာဖူးသလား” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်၏ ရှေးယခင်က အသုံးပြုခဲ့ဖူးသော “ဤသို့သောအရာ”ကို ဖျက်ဆီးရာတွင် အတိတ်က အသုံးပြု ခဲ့ဖူးသော နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ မရနိုင်သည်မှာ ထင်ရှားလှပါသည်။ ကျွန်တော်က အစီအ စဉ်ထဲတွင် အိမ်တိုင်ရာရောက်လည်ပတ်ခြင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ၎င်းသည် အတိတ်က အလွန်ပင် အကျိုးရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ယခုတွင် “ဤသို့သောအရာ” များကို ကိုင် တွယ်ရာတွင် အသင်းတော်ရှိလူငယ်များအတွက် အထောက်အကူမဖြစ်တော့ပါ။
ယနေ့ခေတ်တွင် “ဤသို့သောအရာများ” တွင်အသုံးလုံးဝမတည့်တော့သည့် အရာ များစွာရှိပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ခရစ်တော်က အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဤသို့ဆိုသည်။ “သင်တို့သည် အခြားနေရာတွင် အဆင်ပြေချော့မွေ့သော သင်တို့၌ရှိသည့် တန်ခိုးသည် ဤ နေရာတွင် အကျိုးမရှိသည်ဖြစ်၍ ကျဆုံးခဲ့ရပါသည်။” သင်သည် “ဤသို့သောအရာ” အောက် တွင်ရှိနေသော လူငယ်လေးကို အကူအညီပေးရလောက်အောင် တန်ခိုးမရှိကြပါ။
အတိတ်က လုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှသောအရာတို့သည် ပစ္စုပန်ကာလတွင် အကျိုးမရှိဖြစ် နေသည်ကို သင်းအုပ်များစွာတို့က သတိပြုမိလာသည်ကို သိရသည်။ သို့ရာတွင် သူတို့သည် စာတန်၏“လှည့်ဖြားမှု” ထက် နည်းဗျူဟာများကိုသာ ဆန်းစစ်လေ့လာနေကြပါသည်။ ( ၂ ကော ၂း ၁၁ ) ထို့ကြောင့် သူတို့သည် အရင်ထက် လုံးဝပိုမကောင်းသည့်နည်းစနစ်များကို ရှာ ဖွေနေကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သူတို့သည် အသင်းတော်၌ခိုင်မာသော လူငယ်များဖြစ်လာစေ ဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိမရှိပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကမ္ဘာဦးကျမ်း၏ဖန်ဆင်းခြင်းအ ကြောင်းမှန်ကန်ပြီး ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် မှားယွင်းကြောင်း လူငယ်များကို “သက်သေပြ” ရန် အဖြေ ကို ကျွန်တော်တို့ကို ပြောနေသော လူများရှိပါသည်။ သူတို့က လူငယ်များသည် ပြောင်းလဲကြ သည်ဟု ထင်မှတ်နေကြပါသည်။အခြားသူများသည်လည်း ကမ္ဘာကြီးထဲက လာကြသည်ဟု ထင်ကြသည်။ သူတို့သည် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို သက်သေမပြနိုင်ဘဲ ကမ္ဘာဦးကျမ်းထဲတွင် အဖြေ မရှာနိုင်ရင် အဆင်မပြေဟုထင်ကြသည်။ သူတို့က ဤနည်းလမ်းအားဖြင့် မျက်မှောက်ခေတ် အခြေအနေကို ကောင်းမွန်သင့်လျော်စေမည်ဟု ထင်မှတ်နေကြပါသည်။
ဒေါက်တာ Lloyd-Jones က “လူတို့သည် ၎င်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းကျောင်းသည့်အခါ တစ်ဆယ့်ရှစ်ရာစုအစပိုင်းက ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့က ဤအ ရာများသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏သမ္မာတရားကိုပြသကြမည်ဟု သင်ကြားပေးကြသည်။ သို့ ရာတွင် ထိုသို့ဖြစ်မလာပါ။ “ဤသို့သောအရာသည် ဘာမျှ အကျိုးထူးမလာပါ။”
ကျဆုံးသည့် အခြားနည်းလမ်းမှာ ခေတ်သစ်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ လူ ငယ်များက King James ကျမ်းစာကို နားမလည်ကြဟု ဆိုကြသည်။ ကျွန်တော်တို့လိုအပ် သည်မှာ ခေတ်သစ်ဘာသာစကားဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုသည့် ကျမ်းစာဖြစ်သည်။ လူငယ်များက ၎င်းကို ဖတ်ရှုကြမည်။ သူတို့က “ဒါက ခရစ်ယာန်ဘာသာပဲ” ဟုဆိုကြမည်။ ထို့အပြင် သူတို့ က ဘုရားကျောင်းသို့လာကြမည်။ သို့ရာတွင် အဲလိုလည်းဖြစ်မလာခဲ့ပါ။ တကယ်တော့ ဆန့် ကျင်ဘက်အကြောင်းတရားသာဖြစ်လာသည်။ လူငယ်များနှင့် နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်နီးပါး အ လုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဤခေတ်သစ်ဘာသာပြန်ဆိုကျမ်းများကလည်း လူငယ်တွေကို လုံးဝမဆွဲ ဆောင်သည်ကို သိထားပါသည်။ တကယ်တော့ သူတို့အများစုက “မကောင်းပါဘူး။ ကျမ်းစာ လောက်တောင်မကောင်းဘူး” ဟု ပြောသည်က များပါသည်။
ကျွန်တော်က ခေတ်သစ်ဘာသာပြန်ကျမ်းထဲကနေ လုံးမ တရားမဟောဖူးပါ။ ဘယ် တော့မှ ဟောမည်မဟုတ်ပါ။ အသင်းတော်၌သော်လည်းကောင်း၊ မယုံကြည်သူကြားထဲ၌ သော်လည်းကောင်း အချိန်တိုင်း လူတွေပြောင်းလဲလာကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဤခေတ် သစ်ဘာသာပြန်ဆိုကျမ်း၏တန်ဖိုးသည် မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ သူတို့သည် ပြဿနာကိုတော့ လုံး၀ မဖြေရှင်းနိုင်ကြပါ။ “ဤသို့သောအရာ” ကို မကိုင်တွယ်နိုင်ကြပါ။
သူတို့ ကြိုးစားအားထုတ်တာ ဘာကျန်သေးလဲ။ အကြီးမားဆုံးသောအရာမှာ ခေတ် သစ်တေးဂီတပင်ဖြစ်ပါသည်။ “ယခုတေးဂီတကို တီးမှုတ်မယ်။ သူတို့က အသင်းတော်ထဲလာ ပြီး ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာကြမည်။” ဒါက ဝမ်းနည်းစရာပါပဲ။ ထိုအကြောင်းကို ကျွန်တော်က ထောက်ခံပေးရမလား။ အခုနအကြောင်းအရာကို လော့ခ်အိန်ဂျယ်တွင်လုပ်ဆောင်နေသော တောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်ရှိသည်။ သင်းအုပ်ဆရာက တီရှက်အိင်္ကျီကိုဝတ်ပြီး ခုံပေါ် ထိုင်လိုက်သည်။ ထိုသို့ တရားမဟောမှီ ရော့ခ်တေးဂီတဖျော်ဖြေမှုကို တစ်နာရီကြာမျှ ပြုလုပ် ခဲ့ပါသေးသည်။ ကျွန်တော်တို့၏လူထဲက တစ်ဦးသည် သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ သူသည် စိုးထိတ်သွားခဲ့သည်။ သူက အစီအစဉ်က မှောင်မဲပြီး ရင်နင့်ဖွယ်ရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာ နိုးထမှု လုံးဝမဖြစ်ဟု ဆိုသည်။ သူက ထိုလူတို့သည် ဘယ်တော့မှ ဝိညာဉ်ရိတ်သိမ်းမည်မ ဟုတ်။ ကျွန်တော်တို့လူငယ်များလုပ်သကဲ့သို့ နာရီတစ်ချက်တောင် ဆုတောင်းနိုင်မည်မထင် ဟု ဆိုသည်။ ဆုတောင်းခြင်းမှတပါး ဘာမျှမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ထားလိုက်ပါတော့လေ။ ထို့ ကြောင့် ခေတ်သစ်ရော့ခ်တေးဂီတသည်လည်း “ဤသို့သောအရာ” ကို အနိုင်ယူဖို့ ခက်ခဲနေ ဆဲပါ။
၃။	တတိယအချက်မှာ မကောင်းသည့်တန်ခိုးအောက်ထဲသို့ ထိုးဖောက်ဝင် ရောက်ပြီး အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာကြေမွစေနိုင်သည့်အရာလိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုသာရှိသည်။ ၎င်းမှာ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုး တော်ဖြစ်ပါသည်။
ဒေါက်တာ Lloyd-Jones က “ဤသို့သောနတ်၏တန်ခိုးသည် ကြီးမားသည်၊ ဘုရား သခင်၏တန်ခိုးသည် သာ၍ကြီးသည်။ ကျွန်တော်တို့လိုအပ်သည်မှာ အသိဥာဏ်မဟုတ်ပါ။ နားလည်နိုင်စွမ်း၊ သိကျွမ်းပိုင်းခြားနိုင်ခြင်း၊ (ဘာသာပြန်ခြင်းများ သို့မဟုတ် ရော့ခ်တေးဂီတ) များမဟုတ်ပါ။ လူ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သည့်တန်ခိုး၊ သူတို့ကိုချိုးဖျက်ပြီး ပြင်ဆင်ကာ သူတို့ကိုနှိမ့်ချစေမည့် တန်ခိုး၊ အသစ်ပြင်ဆင်သောတန်ခိုးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းမှာ အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးပင်ဖြစ်ပါသည်” ဟုဆိုပါသည်။ ထိုအရာက အခြေပြု ကျမ်းဆီသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပါသည်။
“အကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုနတ်ကို အဘယ့်ကြောင့် မနှင်ထုတ်နိုင်ပါသ နည်းဟု တိတ်ဆိတ်စွာမေးလျှောက်ကြသော်၊ ကိုယ်တော်က၊ ဆု တောင်းခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်းမှတပါး အဘယ်သို့သောအားဖြင့် ထိုနတ်မျိုးသည် မထွက်နိုင်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” ( မာကု ၉း ၂၈-၂၉ )
ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ “ဤသို့သောနတ်မျိုး” တည်းဟူသော စာတန်၏တိုက်ခိုက်မှုကို အောင်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကို အကူအညီပေးနိုင်သည့် အရာမရှိပါ။ ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်သည် လူငယ်များကို မသိမ်းပိုက်နိုင်ပါ။ မည်သည့်အ ရာကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသနည်း။ “ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းမှတပါး ဤသို့သော နတ်မျိုးကို မနှင်ထုတ်နိုင်ပါ။”
အချို့ “ပညာရှင်” များက “အကောင်းဆုံးစာမူက “နှင့်အစာရှောင်ခြင်း” ပြောသည်ဟု ဆိုကြသည်။ သို့ရာတွင် နတ်ဆိုးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထို“ပညာရှင်” ကာ ဘာသိတာလဲ။ လမ်ဘေး မြို့ရဲ့ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်ထဲက၊ လမ်းမပေါ်က လူများပြောင်းလဲလာသည်အကြောင်းကို မည် သို့သိပါသနည်း။ သူက နိုးထမှုအကြောင်း ဘယ်လိုနားလည်ပါသနည်း။ တရုတ်ပြည်တွင် တွေ့ကြုံနေကြသည့် နိုးထမှုများကဲ့သို့သော နိုးထမှုဖြစ်သည်။ သူက ထိုအကြောင်းတွေ လုံး၀ မသိပါ။ ကျွန်တော့်ဘဝမှာ အပြစ်ကိုစိုးထိတ်နေသည့် နိုးထမှုကို မျက်စိဖြင့်သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် မြင်ခဲ့ဖူးသည်။ ထိုအကြောင်းကို ဟောဖို့ ကျွန်တော့်မှာ အခွင့်အရေးရှိသည်မှာ ကြီးမားလွန်းလှ ပါသည်။ သူတို့သည် ဧဝံဂေလိအလုပ် လုပ်နေကြသည်မဟုတ်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်သည် သူတို့နှလုံးသားထဲသို့ တိုးဝင်လိုက်သောအခါ သူတို့သည် ကြေကွဲလာကြပါ သည်။ နှိမ့်ချမှုရှိလာကြသည်။ ခရစ်တော်၌ အသစ်သောသတ္တဝါဖြစ်လာကြပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့သည် “အစာရှောင်ခြင်း” စကားလုံးကို ဖယ်ရှားသော ခေတ် ဟောင်းကျမ်းစာမူနှစ်ခုကို လိုက်ကြမည်မဟုတ်ပါ။ နိုးစတိတ်အဖွဲ့က အစာရှောင်ခြင်းကို အ လွန်အကျွံအလေးထားကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဆနိတ်တီကပ်ကော်ပီက “အစာရှောင်ခြင်း” စ ကားလုံးများကို ဖယ်ရှားကြသည်။ အကြောင်းမှာ နိုးစတိတ်အားဖြင့် အသုံးပြုသောကျမ်းပိုဒ်ကို အကာအကွယ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ “နိုးစတိတ်အဖွဲ့များက “ငတ်မွတ်ခြင်းသဘောဖြင့် အစာ ရှောင်ခြင်းကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြပါသည်။” (William R. Horne, Trinity Evangelical Seminary, “အသင်းတော်သမိုင်း၌ အစာရှောင်ခြင်းကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်း”၊ စာ-၃ ) ခေတ် သစ် “ပညာရှင်များ” က ထိုစကားလုံးများကို ကူးယူချိန်က ပေါင်းထည့်သည် ဟုဆိုကြသည်။ သူတို့က ဖယ်ရှားသည္က ပို၍ပင်ထင်ရှားသိသာသည်။ ( နိုးစတိတ်ဝါဒ၏လှို့ဝှက်သမိုင်း၊ သူ တို့၏ကျမ်းစာ၊ ယုံကြည်မှုနှင့်ထုံးတမ်း၊ Andrew Phillip Smith ရေးသားသည်၊ အခန်း ၅၊ စာ- ၁ ) ခရစ်တော်က “နှင့်အစာရှောင်ခြင်း”ဟု မိန့်မူသည်ကို သိသည်။ ထိုအကြောင်းကို မည်သို့ သိရှိရမည်နည်း။ အကြောင်းအရာနှစ်မျိုးကြောင့် သိရပါသည်။ ပထမအချက်မှာ တပည့်တော် များသည် နတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်သည့်အစောပိုင်းတွင် ဆုတောင်းကြသည်မှာ ထင်ရှားသည်။ ထို့ ကြောင့် တစ်ခု ထပ်ပေါင်းလာသည်။ တစ်ခုလိုအပ်လျက်ရှိသည်။ အစာရှောင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါ သည်။ ဆုတောင်းခြင်းတစ်ခုတည်းလည်း မလုံလောက်ပါ။ အတွေ့အကြုံအားဖြင့် ထိုအရာကို သိရပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဆုတောင်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း အစာရှောင်ခြင်းနှင့် ဆု တောင်းခြင်းတွင် စိတ်နှလုံးသွင်းလောင်းသောကြောင့် ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်သောအမှုများ ကို မျက်စိဖြင့် မြင်ခဲ့ကြရပါသည်။
ယခုတွင် ဒေါက်တာ Martyn Lloyd-Jones ၏ ပြောစကားကို ကိုးကားလျက် အဆုံး သတ်လိုပါသည်။ အလွန်ကြီးမားသည့် တရားဟောဆရာဖြစ်ပါသည်။ အမြင်ကြည်လင်မှုရှိပါ တကား။ သူ့အတွက် ဘုရားသခင်ကို အလွန်ချီးမွမ်းမိသည်။ အခြားနေရာတွင် သူက ဤသို့ ဆိုပါသည်။
အစာရှောင်ခြင်းမေးခွန်းကို ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်သင့်သော ကျွန်တော်တို့၌ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖူးခြင်းရှိမရှိကို အံ့ဩသည်။ အဓိကကျ သောအချက်မှာ ထိုသို့မဟုတ်။ အဓိကအကြောင်းအရာသည် ကျွန် တော်တို့အသက်တာထဲက လွတ်ကျသွားဟန်ရှိသည်။ ခရစ်ယာန် အတွေးအခေါ်ထဲက လွတ်ကျသွားဟန် မတူပေဘူးလား။
ထို့အပြင် အခြားအရာများထက် ကျွန်တော်တို့သည် “ဤသို့သောနတ်မျိုး” ကို အဘယ့်အ ကြောင်းကြောင့် အနိုင်မရရှိခဲ့ကြပါသနည်း။
အသင်းတော်၌ ပုံမှန်အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကို လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး နောင်တွင် များစွာ ပြောဆိုမည်။ ကျွန်တော်တို့အစာရှောင်သည့်အချိန်၌ ပြောပြ မည်။ မည်သို့အစာရှောင်ရမည်၊ မည်သို့အဆုံးသတ်ရမည်ကိုလည်း သင်တို့အားပြောပြမည်။
ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားကျောင်းသို့လာပြီး ဆုတောင်းခြင်းမတိုင်မှီ အစာစားကြပါသည်။ ဖုန်းဆော့နေသူအနည်းစုကို ဒေါက်တာ Cagan က ခဏဖုန်းဆက်ရန် ပြောလိမ့်မည်။ ကျန်တဲ့ ကျွန်တော်တို့က ဆုတောင်းကြသည်။ ဒေါက်တာ Cagan နှင့် ကျွန် တော်က မေးခွန်းများရဲ့အဖြေကို ပေးကြပါသည်။
၁။	အစီအစဉ်အသစ်များ အောင်မြင်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အစာရှောင်ဆုတောင်းမည်။
၂။	“လူငယ်” မိန်းကလေး၊ “လူငယ်” ယောက်ျားလေးသစ်များအတွက် အစာရှောင် ဆုတောင်းမည်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်၊ တနင်္ဂနွေညနေပိုင်းတွင် ရောက်လာ ကြသည့် ငါးယောက် သို့မဟုတ် ခြောက်ယောက် “လူငယ်” အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ သူ တို့သည် တပည့်တော်ဖြစ်လာရန်လည်း စိတ်ဝင်တစားရှိကြပါသည်။
၃။	ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွင် ပြောင်းလဲခြင်းရှိဖို့လည်း အစာရှောင်ဆုတောင်းရ ပါမည်။ “ဤသို့သောအရာ” များအပေါ် အဓိက ဦးတည်ထားရမည်။ ဤသို့သော အရာများတည်းဟူသော ခံစားချက်ကို လူတို့အားလိုက်ရှာစေပြီး ကျေးကျွန်ပြု သော နတ်ဆိုးဖြစ်ပါသည်။
ယခုအချိန်တွင် ယေရှုအကြောင်းမပြောဘဲ ဤအစည်းအဝေးကို မရုပ်သိမ်းလိုပါ။ ယေရှု၌သာ အရာအားလုံးပြည့်စုံသည်။ ဟေဗြဲဩဝါဒစာစောင်က ဤသို့ဆိုပါသည်။
“ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် လူအပေါင်းတို့ အတွက်ကြောင့် အသေခံရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းဌါ၊ ကောင်းကင် တမန်တို့အောက်၌ အနည်းငယ်နှိမ့်ပြီးမှ၊ အသေခံရသောကြောင့် ခေါင်းတော်၌ ဘုန်းအသရေပတ်ရစ်လျက်ရှိသည်ကို ငါတို့မြင်ကြ ၏။” ( ဟေဗြဲ ၂း ၉ )
ဘုရားသခင်၏သားတော်၊ ယေရှုခရစ်သည် အပြစ်သားတို့ကိုယ်စား၊ အပြစ်သားတို့အ တွက် အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ ယေရှုသည် အသွေးနှင့်အသားဖြင့် သင့်အား အသက်ကိုပေး ရန် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ သင်သည် အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်းကို ယေရှုထံမှာ လက်မြှောက်လိုက်လျှင် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းဖြင့် သင့်အပြစ်ကို ဖြေရှင်းပေလိမ့် မည်။ ကယ်တင်ရှင်အပေါ် မိမိကိုယ်ကို ပုံအပ်သည်နှင့် သင့်အပြစ်အလုံးစုံတို့သည် ခရစ်တော် ၏မြတ်သောအသွေးတော်အားဖြင့် ထာဝရချေဖျက်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။ သင်သည် ယေရှု ခရစ်ကို ယုံကြည်ကိုးစားပြီး အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းရရန် ဆုတောင်းပါသည်။ အာမင်နှင့်အာမင်၊ အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး သင်တို့ရဲ့သီချင်းစာရွက်ထဲက နံပါတ် ၄ ကို သီဆိုကျူးဧကြပါစို့။
ခိုင်မာသောရဲတိုက် ကိုယ်တော်ဖြစ်သည်၊ ဘယ်တော့မှ မပြိုပျက်ပါ၊
ကျွန်ုပ်တို့ရန်သူကြီးက မကောင်းမှုပြုစေရန် လိုက်၍ရှာသော်လည်း၊
မြေကြီးပေါ်မှာ သူ့တန်ခိုး နှိုင်းမရပါ။
ကိုယ့်ခွန်အားတန်ခိုး စွမ်းဆောင်နိုင်လား၊ ရုန်းကန်မှုများ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင်သည်၊
ကျွန်ုပ်တို့ဘက်ရှိ မှန်ကန်သောသူ၊ ဘုရားသခင်ရွေးချယ်ထားသောသူများ၊
အဘယ်သူဖြစ်ကြောင်း မေးပါသလား၊ ခရစ်တော်ဘုရား၊ ယေရှုပေတည်း၊
စစ်ပွဲတွင် အောင်မြင်ခြင်းသရဖူကို ဆောင်ထားသည်။
( “ခိုင်မာသောရဲတိုက် ကိုယ်တော်ဖြစ်သည်၊” Martin Luther, ၁၄၈၃-၁၅၄၆ ).
“ခေတ်ဟောင်းတန်ခိုးတော်” ၊ (Paul Rader ,၁၈၇၈-၁၉၃၈ ရေးစပ်သည်။)
( မာကု ၉း ၁၈ )
၁။	ပထမအချက်မှာ “ဤသို့သောနတ်မျိုး” ဖြစ်သည်။ တမန် ၂၆း ၁၈၊ ဧဖက် ၆း ၁၂၊ ၂း ၂။
၂။	ဒုတိယအချက်မှာ ကျဆုံးသောနည်းစနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ၂ ကော ၂း ၁၁။
၃။	တတိယအချက်မှာ မကောင်းသည့်တန်ခိုးအောက်ထဲသို့ ထိုးဖောက်ဝင် ရောက် ပြီး အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာကြေမွစေနိုင်သည့်အရာလိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ လုပ် ဆောင် နိုင်သည့်အရာတစ်ခုသာရှိသည်။ ၎င်းမှာ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော် ဖြစ်ပါသည်။ ဟေဗြဲ ၂း ၉၊